Onollo: Social Media Management maka Ecommerce | Martech Zone
Onollo: Social Media Management maka Ecommerce
Na Tọzdee, Septemba 7, 2021 Na Tọzdee, Septemba 7, 2021 Douglas Karr
Ụlọ ọrụ m anọwo na -enyere ndị ahịa ole na ole aka itinye na ịgbasawanye ha Shopify mgbalị ahịa n'ime afọ ole na ole gara aga. N'ihi na Shopify nwere nnukwu ahịa ahịa dị na ụlọ ọrụ e-commerce, ị ga-achọpụta na enwere ọtụtụ ngwakọta arụpụtara nke na-eme ka ndụ dịrị ndị ahịa mfe.
Ahịa azụmahịa na -elekọta mmadụ US ga -eto karịa 35% karịa ijeri $ 36 na 2021.
Insider ọgụgụ isi
Uto nke azụmaahịa na -elekọta mmadụ bụ ngwakọta nke sistemụ ụgbọ ala agbakwunyere na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta na -ejikọ yana omume onye na -azụ ahịa na -agbanwe nke ukwuu n'afọ gara aga. N'iburu nke ahụ n'uche, ụlọ ọrụ e-commerce nwere ike chọọ ịkekọrịta ma kwalite ngwaahịa na mkpọsa ha n'ụzọ dị mfe. Sistemụ mgbasa ozi na -elekọta mmadụ anaghị ejikọkarị ọnụ iji jide ma soro usoro mgbasa ozi soro usoro mgbasa ozi gị wee zụọ ahịa… ruo ugbu a.
Onollo: Hazie ma kwalite Posts Azụmaahịa Ọha
Nke a bụ nnukwu vidiyo vidiyo:
Onollo na-enye usoro njikwa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ nwere ọgụgụ isi, nke ejikọtara ọnụ maka mkpa e-azụmahịa gị, gụnyere:
Ngwakọta Ecommerce - Mmekọrịta nke etinyere na ya Shopify, Magento, WooCommerce, na Nnukwu ibu.
Mbisa ngwaahịa - Nweta, dezie ma bipụta data katalọgụ ngwaahịa gị na ịpị ole na ole. Onollo na -ewepụta data ngwaahịa n'ụlọ ahịa gị site na ịpị naanị otu ịpị. Ị nwere ike ịmepụta akwụkwọ mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-enweghị nbudata nke ihe onyonyo, aha ngwaahịa, nkọwa, ọnụahịa, URL, wdg. Na -anya okporo ụzọ organic n'efu. Gwa ụwa ihe ị na -ere.
Kalenda - Mepụta ụdị mgbasa ozi ọhaneze n'ụdị ọ bụla site na iji data ngwaahịa sitere na ụlọ ahịa gị. Hazie ma lelee akwụkwọ mgbasa ozi ọhaneze niile na kalenda Onollo.
Ịma Ọkwa Smart - Onollo's algorithm AI AI algorithm na -atụ aro oge kacha mma maka ọkwa gị ọzọ. Agaghị eche echiche ọzọ. Mgbasa mgbasa ozi kwesịrị ịdị mfe.
Autopilot (Njirimara Ime Anwansi) - Nọgidenụ na -ebipute mgbe ị na -ezu ike. Autopilot ga -ahọrọ ma bipụta ọdịnaya dị mkpa n'oge kwesịrị ekwesị na netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta gị niile.
Banye maka Akaụntụ Onollo efu
Tags: amazonBigCommerceebayFacebookgoogleLinkedInmagentoonolloPinterestụlọ ahịaelekọta mmadụ mediasocialpost autopostkalenda mgbasa ozinjikwa elekọta mmadụusoro mgbasa oziTikTokTwitterNa-achọwixwoocommerce
Otu esi enyocha arụmọrụ Organic Search (SEO) gị
Kedu ihe bụ isi websaịtị Google na ihe kpatara ahụmịhe ibe?